ကလေးအလုပ်သမား — Steemit
ကလေးများကသူတို့ကိုအစားတိုင်းပြည်၏တန်ခိုးဖြစ်ခြင်း၏တိုင်းပြည်များ၏အားနည်းချက်များအတွက်အကြောင်းပြချက်အောင်မိဘများနှင့်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၏သို့သော်မလျော်ကန်သောနားလည်မှုကိုသူတို့နိုင်ငံရဲ့အရေးအပါဆုံးပစ္စည်းအဖြစ်ထိန်းသိမ်းထားကြသည်။ ဆင်းရဲမွဲတေမှုမျဉ်းအောက်တွင်အမြိုးသားတို့အများစုမှာပင်အသိအမြင်အစိုးရက run အစီအစဉ်နှင့်သူငယ်၏သက်သာချောင်ချိရေးကိုဦးတည်လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အနာဂတ်သက်သာချောင်ချိရေး၏စာရေးပြီးနောက်နေ့စဉ်ကလေးအလုပ်သမားလုပ်ဖို့အတင်းအကျပ်နေကြသည်။
ကလေးများသို့သော်အချို့သောလူတွေအာဏာကိုကျဆင်းရုံတရားမဝင်ကြီးထွားလာလေးတွေနှငျ့ပတျသကျသောအားဖြင့်သေးငယ်တဲ့ပိုက်ဆံဝင်ငွေအဘို့တိုင်းပြည်အနာဂတ်ကိုဖျက်ဆီးနေကြသည်ဘယ်နိုင်ငံနဲ့မဆို၏အစွမ်းထက်အမွှေးအကြိုင်တွေနဲ့အသစ်ကပန်းပွင့်ကြသည်။ သူတို့ကအပြစ်မဲ့ပြည်သူများနှင့်၎င်းတို့၏လေးတွေ၏ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်အတူကစားနေကြသည်။ ယင်းကလေးအလုပ်သမားထံမှကလေးများဖြင့်ကာကွယ်ခြင်းအသီးအသီးများနှင့်တိုင်းပြည်တွင်နေထိုင်တိုင်းနိုင်ငံသားများ၏တာဝန်သာဖြစ်ပါသည်။ ကလေးအလုပ်သမားရှည်လျားလွန်ခဲ့တဲ့ကနေလာမယ့်ယခုအဆုံးစွန်အခြေခံပေါ်မှာဖြေရှင်းခံရဖို့လိုအပ်သောလူမှုစီးပွားပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။
တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးပြီးနောက်အမျိုးမျိုးသောဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းဒါပေမဲ့ဒါဟာတိုင်းပြည်အတွက်၎င်း၏အဆုံးကိုတွေ့မကလေးအလုပ်သမားနှင့် ပတ်သက်. အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တိုက်ရိုက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, လူမှုရေးအရနှင့်ဥာဏ်ရည်ဟာသူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုဖျက်ဆီးနေဖြင့်ကလေးတွေ၏အပြစ်ကင်းစင်ဖျက်ဆီးကလေးအလုပ်သမား။ ကလေးများ၏သဘောသဘာဝ၏ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဖန်တီးမှုတွေဟာပေမယ်ကြောင့်အချို့မကောင်းတဲ့အခြေအနေများသူတို့သင့်လျော်သောအသက်အရွယ်မတိုင်မီအလုပ်ကြမ်းလုပ်ဖို့အတင်းအကျပ်ဖြစ်ကြောင်းမျှတဘူး။
ကလေးအလုပ်သမားအဆိုပါဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့နိုင်ငံတချို့ကပိုပြီးဘုံဖြစ်သောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပ ဆင်းရဲမွဲတေမှုမျဉ်းအောက်မှာညံ့ဖျင်းသောမိဘများသို့မဟုတ်မိဘများကသူတို့ကလေးတွေ၏ပညာရေးကုန်ကျစရိတ်မတတ်နိုင်နိုင်ခြင်းဖြစ်ကြပြီးသူတို့မိသားစုရပ်တည်ရေးအတွက်လုံလောက်သောငွေရှာနိုင်ခြင်းကိုပိုင်ဆိုင်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကပိုကောင်းမယ့်အစားကျောင်းကမှသူတို့ကိုမပို့၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ခက်ခဲမှုအမျိုးမျိုး၌၎င်းတို့၏လေးတွေပါဝင်ပတ်သက်ဖို့ရွေးချယ်ပါ။
သူတို့ကကျောင်းပညာရေးအချိန်ဖြုန်းသည်နှင့်အစောပိုင်းအသက်အရွယ်အတွက်ပိုက်ဆံဝင်ငွေ၎င်းတို့၏မိသားစုများအတွက်ကောင်းသောကြောင်းနားလည်ပါသည်။ ဒါဟာကလေးအလုပ်သမားများ၏မကောင်းတဲ့သက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. သတိပြုမိသူသည်ဆင်းရဲသောသူကလူအဖြစ်ကြွယ်ဝတဲ့လူတွေ (မှားယွင်းတဲ့လမ်းအတွက်တိုင်းပြည်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုမသုံးမှ) ဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေသည်။ သူတို့ဟာသူတို့ကင်းမဲ့သမျှသောအရင်းအမြစ်များနှင့်အတူကာကှယျမှုရယူရမည်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာလူတိုင်းအတွက်၏အဆုံးပြုရပါမည်။ သူတို့သားသမီးလည်းငယ်စဉ်ကလေးဘဝအားလုံးကိုလိုအပ်သောအမှုအရာအရနိုင်အောင်ကြွယ်ဝသောလူများတို့သည်ဆင်းရဲသားတို့ကိုလူတွေကိုကူညီသင့်တယ်။ ဒါဟာအစိုးရကအချို့သောထိရောက်သောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနှင့်စည်းမျဉ်းများကိုလုံးဝကိုအစဉ်အမြဲအမြစ်ကိုအဆုံးသတ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
#good-karma #stop #child #labour
အရြယ္နဲ႔မလိုက္ အလုပ္လုပ္ေနရတဲ႔ကေလးငယ္ေတြ အမ်ားႀကီးေတြ႔ဖူးတယ္
ရြာေတြ မွာ ေလးတန္းေလာက္ေရာက္တာနဲ႔ ေက်ာင္းထုတ္ျပီး လယ္ယာထဲပဲ ဆင္းခိုင္းတာမ်ားတယ္